Imali ekhokhwayo ye-HGH ku-courier ngesikhathi sokulethwa kuPhuket - HGH Phuket
Imali ekhokhwa nge-HGH kuthunyelwe ngesikhathi sokulethwa kuPhuket
Ukukhokha ngoKheshi - Indlela elula, ephephe futhi elula kunazo zonke yokukhokhela imikhiqizo ye-HGH yamakhasimende noma izivakashi ezivamile ePhuket. Ungakhokhela i-oda lakho ngesikhathi sokulethwa ngqo ezandleni zeposi yethu. Ngaphambi kokukhokha ukheshi, ungavula, ubheke futhi uqinisekise ubuqiniso bemikhiqizo yethu ye-HGH bese uthola imiyalo yokuthi ungayisebenzisa kanjani (noma ucele idemo)
Qaphela: sicela ulungiselele inani elidingakalayo ngokheshi, ngaphambi kokufaka i-oda, amabhange amanye amazwe anemikhawulo yokukhishwa kwemali ngosuku. Uma ubhekene nomkhawulo wokukhipha imali, sicela uxhumane nebhange lakho.
Noma sijabule ukukunikeza ezinye izindlela zokukhokha eziku-inthanethi, njengokukhokha kwamakhadi wesikweletu ngokugcwaliswa kabusha kwesikhwama sethu seBitcoin noma ngosizo lokudluliselwa kwebhange laphesheya, ezinye izindlela nazo kungenzeka.
Kufakwe ku: Thenga i-HGH Phuket, HGH Phuket
esihlokweni esandulele I-ATM Ikhefu leDistimali
USeon - NgoJuni 1, 2019
Sawubona, ngingakwazi ukukhokha amadola aseMelika lapho kuhanjiswa ukuthunyelwa?